Midowga Yurub oo Shaaciyay in Ciidamada Soomaaliya lagu Tababari doono Gudaha Dalkooda Marka la gaaro 2014-ka |
Midowga Yurub oo Shaaciyay in Ciidamada Soomaaliya lagu Tababari doono Gudaha Dalkooda Marka la gaaro 2014-ka
Khamiis, December 19, 201 – Midowga Yurub ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya lagu tababari doono gudaha dalka marka la gaaro sannadka 2014ka iyadoo la joojinayo ciidamadii dalka Uganda loo qaadi jiray si loogu soo tababaro halkaasi.
Midowga Yurub ayaa shaaciyay in tallaabadan ay ka dambaysay kadib markii la gaaray horumar dhinaca ammaanka ah sida lagu sheegay qoraal soo baxay iyadoo magaalada Muqdisho ay u guuri doonaan khuburada dhanka tababarrada oo horay ugu sugnaa waddanka Uganda.
“Marka la gaaro bilaha ugu horreeya ee sannadka 2014, Midowga Yurub waxay hawlahooda tababarka ka fulin doonaan magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay midowga Yurub.
“Ujeedku waa in aan gaarsiino Soomaaliya xasilooni xilli ay kasoo kabanayso dagaalladii sokeeye” ayaa lasii raaciyay.
Brigadier General Massimo Mingiardi oo u dhashay waddanka Talyaaniga ayaa loo magacaabay inuu noqdo ninka hormuudka ka noqon doona qorshaha ay midowga Yurub ugu fidinayaan tababarka ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed.
Dawlada Soomaaliya ayaa waxay dagaal kula jirta ururka Alshabaab iyadoo sidoo kalana wajahaysa caqabad dhinaca ammaanka ah gobollada qaarkood ee laga xoreeyay Alshabaab kuwaasoo ay ka dillaaceen dagaal beeleedyo hubaysan oo dad badani ku dhinteen.